SA prepared to work with whoever wins Zim elections: Ramaphosa - Zimbabwe Situation
0	July 30, 2018 2:13 PM
Source: SA prepared to work with whoever wins Zim elections: Ramaphosa – ENCA
File: The South African government will embrace and work closely with whoever emerges victorious in the tightly contested general election in neighbouring Zimbabwe, President Cyril Ramaphosa said on Monday.
PRETORIA – The South African government will embrace and work closely with whoever emerges victorious in the tightly contested general election in neighbouring Zimbabwe, President Cyril Ramaphosa said on Monday.
Ramaphosa said so far, “everything seems to be going well” in the elections, the first polls after former Zimbabwean president Robert Mugabe’s exit.
Millions of Zimbabweans we queuing at numerous polling stations across the country on Monday, participating in watershed elections pitting at least 22 presidential aspirants. Incumbent President Emerson Mnangagwa faces stiff competition from the MDC Alliance’s youthful Nelson Chamisa who seized the baton from late opposition leader Morgan Tsvangirai.
On Sunday, just a day before the polls, a frail looking Mugabe addressed journalists in Harare, taking a dig at his former lieutenant Mnangagwa and endorsing Chamisa.
Zimbabwe’s president rejects Mugabe’s claim that election is not free